बहुरुपिया वाम गठबन्धनबाट सावधान रहन आमजनतालाई उपेन्द्रको अपिल
राजविराज, १८ मंसिर । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मरुभूमिमा परिणत भइसकेको जन्मभूमि सप्तरीलाई समृद्ध क्षेत्र बनाउने उद्घोष गरेका छन् ।
सप्तरीलाई समृद्ध र विकासको दिशामा केन्द्रित गर्न आफूसँग स्पष्ट भिजन र योजना रहेको यादवले बताए ।
मौन अवधि सुरु हुनुअघि प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन बिहानैदेखि सक्रिय रहेका यादवले तिलाठी कोइलाडीको सभालाई विशेष महत्वका साथ सम्बोधन गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मधेश गठबन्धनको तर्फबाट क्षेत्र नं. २ (ख) प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदबार एवं फोरम नेपालका नेता शैलेन्द्र साह, क्षेत्र नं. २ प्रदेश सभा उम्मेदबार एवं राजपा नेता मनिष सुमन, फोरम नेपाल सप्तरीका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश यादव लगायतको उपस्थिति थियो ।